Taliban: Ny vahiny ihany no afaka miala ao Afghanistan avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Afghanistan » Taliban: Ny vahiny ihany no afaka miala ao Afghanistan avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Kabul
Vaovao Mafana Afghanistan • Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Zabiullah Mujahid, mpitondra tenin'ny Taliban
Taliban dia mitaky ny hisorohan'ny fahefana tandrefana amin'ny famoahana ireo olom-banona avara-pianarana ao Afghanistan, toy ny dokotera sy ny injeniera.
Tsy avelan'ny Taliban hivoaka amin'ny alàlan'ny seranam-piaramanidina Kabul.
Taliban dia manakana ny Afghana tsy handositra ny firenena.
Nilaza i Taliban fa ny vahiny rehetra dia tokony hiala ao Afghanistan amin'ny 31 Aogositra.
Ny mpitondra tenin'ny Taliban, Zabiullah Mujahid, dia nanambara androany fa tsy hanaiky ny Afghana hiditra ao amin'ny seranam-piaramanidina Iraisampirenena Hamid Karzai ao Kabul ny vondrona mpikomy Islamista amin'ny fikasana hiala an'i Afghanistan.
Raha niresaka tamin'ny talata tolakandro dia nilaza ny mpitondra tenin'ny Taliban fa tsy avelan'ny Taliban hivoaka ny firenena amin'ny alàlan'ny Seranam-piaramanidina Kabul ary niantso ny andrefana mba tsy hampirisika ny avo lenta hianatra. Notakian'ilay mpitondra tenin'ny mpitondra fanjakana ny tandrefana mba tsy hiala amin'ny toerana ambony any Afghanistan, toa ny dokotera sy ny injeniera.
Nilaza i Mujahid fa ny mpitondra Taliban dia tsy mankasitraka ny famelana ny Afghana hiala, fa nanamafy ihany koa fa ny vazaha rehetra dia tsy maintsy esorina hiala Afghanistan tamin'ny 31 Aogositra ary afaka nanohy nampiasa ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Hamid Karzai mandra-pahatongan'ny fe-potoana io.
Notsongain'i Mujahid ihany koa ny toe-javatra misavoritaka eny amin'ny seranam-piaramanidina ho antony tsy hialan'ny Afghana. Nilaza izy fa ny vahoaka manodidina ny seranam-piaramanidina eto an-drenivohitra dia tokony hiverina any an-tranony, ary milaza fa hiantoka ny fiarovana azy ireo.
Tao anatin'io famelabelaran-kevitra io ihany, nilaza i Mujahid fa afaka mijanona ao Afghanistan ny olona ary nampanantena izy fa tsy hisy ny valifaty. Nilaza izy fa ny Taliban dia nanadino fifandonana taloha ary hamela ny taloha hanadino.
Nohamafisiny ihany koa fa tsy nanaiky ny hanitatra ny fe-potoana 31 aogositra nofaritan'i Etazonia ny Taliban mba hamita ny famindrana azy ireo any Afghanistan.